WoW Dragonflight: Kuburitswa, Beta, Nzvimbo, Kirasi Nyowani - Ruzivo Rwose - Game Point - Bhodhi neMitambo yeVhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Apr 20, 2022 | Vapepeti Sarudzo, nhau, pamusoro, Vhidhiyo mitambo
Dragonflight izita rekuwedzera kutsva kweWorld of Warcraft. Blizzard chaiyo yakaregedza madhiragoni kubva mubhegi sechikamu chechiitiko chinoratidza uye akagovera ruzivo rwakawanda nezve yepfumbamwe WoW yekuwedzera nevateveri mushure mekuzivisa. Kunyanya kunakidza: pachave nekirasi nyowani ine akafona weDracthyr.
World of Warcraft ine nhoroondo refu kwazvo ikozvino. Muna 2004, iyo panguva iyoyo yeMMORPG yeshanduko yakaburitswa muUnited States, pakati pedzimwe nzvimbo.Mwedzi mishoma gare gare - muna Kukadzi 2005 - vateveri vekuEurope vaigonawo kupinda murwendo rwakakura asi rune nyaya. Muna 2009, World of Warcraft yakagamuchira kupinda kwayo muGuinness Book of World Records semutambo unonyanya kufarirwa nevatambi vakawanda pamhepo. Haifanire kunge iri iyo yega rekodhi yekufungidzira MMO. "WoW" yakava budiriro yemari, ichigadzira anopfuura mabhiriyoni gumi emadhora ekuAmerica mukutengesa kweBlizzard Entertainment mumakore masere ekutanga pamusika. Gare gare, iyo MMO yakava chikamu chemahara-2-kutamba kuti uwedzere kuwedzera base base. Zvichakadaro, World of Warcraft yave chiitiko chemhuri: hazvishamisi kuti vadyidzani vatambe pamwechete, vamwe vavo vakangosangana kuburikidza neWoW, vabereki vanosangana nezviitiko nevana vavo, vanasekuru nevazukuru vavo.
Kubva pakaburitswa vhezheni yekutanga, vagadziri vakapa zvinhu zvinogara zviripo - dzimwe nguva zvakanyanya, dzimwe nguva zvishoma zvakanaka. Yakateverwa neThe Burning Crusade (2007), Wrath of the Lich King (2008), Cataclysm (2010), Mists of Pandaria (2012), Warlords of Draenor (2014), Legion (2016), Hondo yeAzeroth (2018) uye nguva pfupi yadarika Shadowlands (2020) - uye haisati yapera, izvo zvakanga zvakajeka kwenguva refu. World of Warcraft: Dragonflight ichave yepfumbamwe yekuwedzera.
World of Warcraft: Dragonflight yakaburitswa zviri pamutemo
Sechikamu chechiitiko chekutepfenyura, Blizzard yakazoburitsa zviri pamutemo kuwedzera kutsva World of Warcraft: Dragonflight. Zvakatora maminetsi mashoma kuti madhiragoni ari muReveal trailer pakupedzisira apenye pascreen. Ipapo zvakazojeka: vatambi vari kudzokera kuAzeroth - zvakanyanya chaizvo: kuDragon Islands.
Blizzard yanga isinganetse neruzivo nezve World of Warcraft: Dragonflight, iyo inoratidza kuti budiriro yatove mberi. Pakave nenguva inopfuura kungoita hwaro hwaro, vagadziri vakasiya pasina kupokana nezvazvo. Iyo cinematic turera yave kutoita kuti iwe ude zvimwe - kunyanya nekuti kuchave nezvakawanda zviri kuitika munyika yehondo:
Caller weDracthyr: New class
Kutariswa kwekuwedzera kwepfumbamwe hakusi kungori nzvimbo nyowani kana kudzokororwa kudiki, asi panguva ino kirasi nyowani. Iyo yakasarudzika parizvino iri kupembererwa nevateveri, nekuti vanofona veDracthyr havasati vajairika uye vanotanga zvine mutsindo pakamira Blizzard neworgen: Kune humanoid uye shato chimiro - imwe neimwe ine zvigadziriso zvekushongedza. Iwo ekupedzisira haasi ekutanga chete, asi akazara. Tani dzeganda, misoro, zviso - zvese izvi zvinogona kugadziriswa zvakasiyana. Pachafanirwawo kuve nerudzi rutsva rwekirasi: Sezviri pachena, Blizzard yakasarudza girinhi yakasviba kwayo.
Chinhu chikuru pamusoro peVanofona veDracthyr muNyika yeWarcraft: Dragonflight ndeyekuti kirasi ichasungirirwa zvakananga kumujaho. Izvi zvinoreva zvakare kuti kirasi nedzinza zvakarukwa zvakanangana nerungano.
Vanofona veDracthyr vanewo hunyanzvi, mbiri muhuwandu. Izvi zvinorangaridza muvhimi wemadhimoni. Vatambi vane kuburitswa kweWorld of Warcraft: Dragonflight inogona kusarudza:
Probation: Uku ndiko kurapa kwehunyanzvi hweDracthyr Vanofona. Vanotsigira vanobatana navo kubva kure muhondo uye vanopa mabheti.
kuparadza: Iyo Devastation nyanzvi ndiyo Kukuvadza-Sec mune Vanofona veDracthyr. Vatambi vanoshandisa makuhwa avo kusunungura dhiragoni mweya kurwisa vavengi. Uye zviri nani kubva kure, sezvo maRavager ari pachena kirasi yekukuvara kwakasiyana.
Mune ese ari maviri hunyanzvi, vanofona veDracthyr vanopfeka ketani tsamba, yakafanana neye shaman.
Kutaura nezve nyaya: Blizzard inoshandisa hunyanzvi hwekuzvarwa kuti ipinde munyaya yevanofona veDracthyr. Iwe uchangomuka, usanyatsoziva chero chinhu uye rega nyika nezviitiko zviitike pauri. Iwe unonzwa - kutanga padanho 58 zvakafanana nerufu knight / dhimoni muvhimi - iyo nyika yemutambo kubva pakuona kweasingazive. Yakakosha questline inosuma vatambi kupasirese neDracthyr yavo. Pakupedzisira, Blizzard inoshandisa pfungwa inozivikanwa zvakare: sezvakaita pandaren, unovasarudzira divi reHorde kana Alliance.
Mapato maviri aya achange achishanda pamwechete muWorld of Warcraft: Dragonflight, maererano neIGN kubvunzurudzwa naIon Hazzikostas naSteve Danuser.
Talent miti yakagadziridzwa zvachose
YeNyika yeWarcraft: Dragonflight, Blizzard iri kuronga kugadzirisa kwakazara kwetarenda system. Izvi zvinonyanya kushamisa nekuti uri kufunga kumashure kune miti yetarenda uye nekudaro kune yakare system. Iyo yekare tarenda muti trio haingokodzerwe, asi pane yakazara pfungwa nyowani ichashandiswa. Chaizvoizvo, pane chete ruzivo rwekutanga pamusoro pazvo, vanogadzira vanga vasina kupa chero ruzivo - iyo pfungwa inofanirwa kutariswa nekuchenjerera kwakakodzera panguva ino.
Vagadziri vacho vanoda kupa vatambi rusununguko rwakawanda mukutamba dhizaini yevatambi vavo. Pachave nemiti miviri yetarenda imwe neimwe: muti wekirasi uye muti wehunyanzvi. Naizvozvo pachave nekukamukana pakati pehunyanzvi hwekutanga uye zvekushandisa pamwe nematarenda akakosha. Izvi zvinofanirwa kuguma nekubatanidzwa kwakasiyana. Shanduko saka zvinogoneka uye mune inogoneka frequency. Iwe unozogadzirisa masanganiswa ako mumenyu, kuti iwe ugone kuchengetedza nekutumidza mazita uye wovafonera zvakare gare gare.
Blizzard zvakare yakanangana neiyo professional system kuita hunyanzvi hwekunakidzwa muWorld of Warcraft: Dragonflight. Chero zvazvingava, panofanira kuva nehukuru hutsva. Tarisiro inogona kunge iri pahunyanzvi: Vatambi vanogona nekudaro kukwira kusvika padanho rehunyanzvi muhunyanzvi hwavo uye kukudziridza mukurumbira semhizha ine hunyanzvi pane server. Hazvinyatso kujeka kuti izvo zvichazotaridzika sei. Asi gwara rinoita kunge rakanyatso kurongeka: kugadzira kunofanirwa kuita basa rakakura kwazvo kupfuura kare.
Dragon Islands: Nzvimbo Itsva
NeNyika yeWarcraft: Dragonflight, vatambi vanozokwidza mavara avo kusvika padanho makumi manomwe munzvimbo dzeDragon Isle yeAzeroth. Pachave nezvikamu zvina zvemitambo nekuwedzera kwepfumbamwe, pamwe neiyo Forbidden Island kubva pamhenderekedzo yeDragon Island. Iyi ndiyo nzvimbo yekudzidzira yeDracthyr:
Semazuva ese, nzvimbo dzichasiyana pakuona uye nemusoro. MuMakomo eAzure, semuenzaniso, nhangemutange yakakurumbira, Tuskarr, inoita basa guru.
Sarudzo yenyika yemutambo yeWorld of Warcraft: Dragonflight inonakidza uye inopa vanogadzira mukana wekutaura nyaya yeWorld of Warcraft kubva pamaonero matsva. Nekuwedzera, vatambi vanoongorora nzvimbo inova imwe yekare muAzeroth. Saizvozvo, ma devs anogona kusvika kunyaya iyi nenzira yekusaziva kuitira kuti vagadzire nyaya nyowani uye mitsara yenganonyorwa - ine mabhenefiti makuru ekuwedzera mune ramangwana. Chero zvazvingava, ngano uye zvishamiso zvekare zvinofanira kuita basa guru. Uye shato chitsuwa zvichida chinopa zvakavanzika zvakakwana.
Ehe, vatambi vanozoongororawo makomba matsva. Iyi ihondo yekutorazve Neltharus, nhare yedragonflight nhema. Vatambi vanogona zvakare kuongorora nzvimbo dzakambovanzwa dzeUldaman kana kudzivirira dziva rehupenyu redragonflight.
Uye kupambwa? Blizzard yakarongawo chimwe chinhu chitsva ipapo, nekuti WoW ingave isingafungidzike pasina kupambwa. Jeri rekare rekutanga incarnations parizvino inozivikanwa. Mariri, vatambi vanofanirwa kukanganisa kurwiswa kweDragon Aspects.
Nekutasva dhiragoni, Blizzard iri kuunza chinhu chitsva pakutanga kweWorld of Warcraft: Dragonflight. Zita reAddon rinotaura zvese, izvo zvisiri zvenjere chete, asiwo zvinobatsira kune vatambi. Panzvimbo pekukwira nesimba kuburikidza nenzvimbo dzekutsvagira kuburitswa kweWorld of Warcraft: Dragonflight, unongokwanisa kubhururuka.
Nechimiro chega chega, vatambi vanowana dhiragoni yavo, iyo inogona kusimbiswa uye kugadziridzwa sezvo mutambo uchifambira mberi - pano zvakare, Blizzard inotarisa zvakanyanya pane zvekushongedza sarudzo. Zvinoenderana nevagadziri, mamirioni emusanganiswa anofanirwa kuitika pano, kuitira kuti munhu anyatso kutaura nezvemunhu. Kana iwe ukakwidza dhiragoni, mifananidzo mitsva inofanirawo kuitika kwavari. Dodge rolls uye kuputika kwendege zviri pakati pezvimwe zviito zvekufamba. Iwe unofanirwawo kukwanisa kubhururuka nepakati pevhavha yegore uye wozokwanisa kudhonza zvipingamupinyi kumashure kwako.
Dhiragoni inotasva inogona kugadziriswa mukati mekuwedzera nemuti wakasiyana weunyanzvi umo runes inogona kushandiswa. Izvo zvatove pachena: kumhanya kwekufamba kuchave kwakakwira zvakanyanya kupfuura neazvino ma mounts endege. Blizzard yakaitawo kuti nzvimbo dzive dzakakura kuti vatambi vabatsirwe kubva kune zvakanakira. Iyo chete yakaderera: Dhiragoni kukwira ichachengeterwa Dragon Island. Saka kumira pamberi peStormwind nedhiragoni yakatarwa haisi sarudzo.
Nekuburitswa kweWorld of Warcraft: Dragonflight, kwete chete kuvandudzwa kukuru kuchauya mukutamba, asiwo akawanda madiki. Imwe yeanonyanya kugadziridzwa ine chekuita nemushandisi interface. Nekuti kuparadza kwenguva kwakanyatso kutsenga kuUI, vanogadzira vanoda kuigadzirisa uye kuivandudza. Iyo mini-mepu yakakura, asi panguva imwechete yakadzikira pasi. Izvo zvinoshandawo kune mamiriro mabhenefiti uye nzvimbo yekuita. Horde neAlliance imwe neimwe ichave neyayo mafuremu - saka iwe unoda kuendesa WoW kune inotevera nhanho neDragonflight maererano neUI optics.
Vanofa-vakaoma mafeni vakatoshongedza, vakagadziridza kana kuchinjisa yavo mushandisi interface nemamodhi - vagadziri vari kutora nzira iyi nekuwedzera kutsva seyero.
Chero zvazvingava, Blizzard inoitawo kunge inokweretesa ruoko nemhando yemifananidzo kana nhanho yeruzivo rwemamwe mamodheru. Kumwe kuvandudzwa kwakajeka kunogona kuoneka pane yekutanga skrini.
Blizzard ichapa beta yeWorld of Warcraft: Dragonflight. Iyi haingori ruzivo rusina kujeka, ichokwadi: unogona kusaina kuNyika yeWarcraft: Dragonflight beta izvozvi pa Bhalisa kune webhusaiti yepamutemo kuti uwedzere. "Nerombo rakanaka" imwe iripo, anodaro Blizzard. Pawebhusaiti pane zvakare ruzivo rwakawanda pamusoro pezvitsva zvemukati, zvese zvinoratidzwa zvakabatana uye nenzira ine mavara.
World of Warcraft: Dragonflight kuburitswa?
Vagadziri vakatopindura mibvunzo yakawanda panguva yekuvhurwa kwechiitiko, asi kwete zvese. Mubvunzo wekuburitswa kweWorld of Warcraft: Dragonflight ingangonyanya kufarira vatambi. Sezvineiwo, panguva ino, zvakadaro, Blizzard matombo ematombo: Imwe parizvino iri kufungisisa nezve "kana yagadzirira" motto. Ikozvino hapana zuva rekuburitswa reWorld of Warcraft: Dragonflight.
Kana iwe uchida kuona Reveal stream mune yakazara:
Kare Ember Knights: Roguelite Adventures muKuwana Kwekutanga
Inotevera Shadowrun: RPG Trilogy yeNintendo Chinja, Xbox uye PS
Stellaris: Yemahara update inokudza munyori wesci-fi Stanisław Lem
Crowdfunding: Yazvino mitambo yebhodhi paKickstarter (19th svondo 2021)